India tried to sabotage Zimbabwe's tour to Pakistan, claims minister - Rediff.com Cricket
Rediff.com » Cricket » India tried to sabotage Zimbabwe's tour to Pakistan, claims minister
June 23, 2015 17:44 IST
Pakistan cricket fans. Photograph: Mark Kolbe/Getty Images
The home minister of Punjab province in Pakistan, Shuja Khanzada, on Tuesday alleged that the Indian spy and intelligence agency Research and Analysis Wing (RAW) had made attempts to ensure that the Zimbabwe cricket team did not tour the country in May.
Even an incident during the second ODI, when a suicide bomber allegedly blew himself up after he failed to penetrate the security ring around the Gaddafi stadium, didn't derail the tour.
"We foiled RAW's attempt to abandon the Pakistan vs Zimbabwe cricket series," he claimed.
Zimbabwe agreed to undertake the tour in May after the PCB gave them financial incentives, including US$ 12,000 to each player, although Pakistan Cricket Board chief Shahayrar Khan rubbished media reports that it was a bribe to the Zimbabwe cricket board to undertake the tour.
Tags: Pakistan Cricket Board, RAW, Shuja Khanzada, Zimbabwe, Lahore